डा. केसीमाथिको राजनीति
Tuesday, 24 Jul, 2018 11:04 AM
मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले राज्यको सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेर आएको छ । यसै विषयलाई लिएर मुलुक तातेको छ । यसै निहुँमा विपक्षीहरुले सडक र सदन तताएका छन् । सत्ता पक्षभित्र पनि यस विषयमा एउटै विचार वनेको छैन । अहिले डा. गोविन्द केसीको १५औँ पटकको अनशनले मुलुक दुई धु्रवमा विभाजित छ । उनले उठाएको विषय सार्वजनिक महत्वको भएकोले अव यो वा त्यो कलेजलाई सम्वन्धन दिने कि नदिने भन्नेमात्र कुरा रहेन सम्पूर्ण रुपले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले कसरी हेर्ने भनेर सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सम्वन्धन नथप्नका लागि अनसनले ब्यापक दवाव दिएको सन्दर्भमा अहिले मेडिकल शिक्षालाई पूरै राष्ट्रियकरण गरेर स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने तर्क उठेको छ । गत वर्ष एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले मनमोहन कलेजलाई राज्यले खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदा अनौठो लागेको थियो धेरैलाई । तर, अहिले वहस यही विषयमा केन्द्रीत भएको छ । सबैभन्दा पहिला यो विषयको नीतिगत टुंगो लगाउन जरुरी छ । त्यसपछि मात्र सरकारले मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरिहाल्यो भने सरकारका अंगहरु त्यसो गर्न सफल होलान् कि नहोलान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । किनकि सरकारले चलाएका धेरै सस्थाहरु टाट पल्टेका उदाहरण हामीसंग छन् । यसको अर्थ राष्ट्रियकरण नगर्ने भन्ने हैन तर, यसका लागि ब्यापक अध्ययन हुन जरुरी छ र खासमा संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरानै चुनौतिको विषय वनेको छ ।
सवाल यति मात्र हैन लगानीकर्ताको वर्षैदेखिको लगानीलाई एकैपटक राष्ट्रियकरण गरेर निरुत्साहित गर्ने कुरा पनि त्यति ब्यावहारिक नहोला । यसले नीजि क्षेत्रलाई तर्साउने र मध्यम वर्गीय समाजलाई नेकपा विरोधी वनाउने काम पनि गर्ला कि ? अहिले मध्यम वर्गको कारणले नेकपा सत्ताको यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो भन्ने कुरा कांग्रेसलगायत सवैलाई थाहै छ । त्यसैले आगामी दिनमा थप संकट ल्याउन सक्ने भएकोले भावावेशमा आएर सवैलाई नीजिकरण गर्छु भन्नु आत्मघाती हुन पनि सक्छ । तथापि, राम्रो विकल्प खोजेर उपयुक्त विधि अपनाउनु अन्यथा हुने छैन । कैयौं वर्ष देखि लगानी गरेपनि उनीहरु प्रायःले नाफा आर्जन गरेका छैनन् । लगानी उठाएका छैनन् । कतिपय सस्थाहरु रुग्ण छन् । त्यसैले सहमतिमा न्यूनतम मुनाफा दिएर वा लगानीको ब्याज दिएर सञ्चालन गर्ने विधि वनाएर एउटा टुंगोमा पुग्न सकियो भने अन्यथा हुने छैन ।
शिक्षालाई पूरै सरकारी वा अर्धसरकारी वा ट्रस्ट वनाएर सञ्चालन गर्ने विधि वनाउन सकियो भने राज्यवाट नियमन हुन सक्ला । खासमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफाखोरको आरोप जसरी लागेको छ, त्यसलाई चिर्न पनि विकल्पमा जाँदा लगानीकर्ताको आत्मसम्मान वढ्न सक्छ । शिक्षण अस्पाताल जुन मोडलमा चलाइएको छ त्यही मोडलमा चलाउन सक्दा पनि उपयुक्त हुन सक्ला । त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाका अनुसार अधिकांश विकसित देशमा मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित हुन्छ ।  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अमेरिकाको हावर्ड युनिभर्सिटी र भारतको मेदान्त अस्पतालको उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित ती सस्थाहरु मुनाफारहित ढंगले चलेको वताउँछन् र ब्यक्तिले लगानी गरेको भएपनि उनीहरूले मुनाफा बाँड्दैनन् ।
खनाल मेडिकल मात्र होइन जुनसुकै शिक्षालाई मुनाफरहित वनाउनुपर्ने तर्क गर्दछन् । निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई ट्रस्ट (गुठी)मा परिणत गर्ने र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई ऋणमा परिवर्तन गरि ऋणको निश्चित व्याज कायम गर्दै केही वर्षमा सम्बन्धित ट्रस्टले ऋण चुक्ता गर्ने विधि उपयुक्त हुने तर्क गर्दछन् । शायद यसो गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । यसो गर्ने हो भने सवैलाई निःशुल्क गर्नु पर्दैन । सक्नेले पैसा तिर्दछ नसक्नेले छात्रवृत्ति पाउँछ र अध्ययन गर्दछ । कुरा यति हो कि अहिलेको छात्रवृत्ति दर वढाउनु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु अहिले मेडिकल शिक्षालाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने वताइरहेका छन् । शेरवहादुर देउवादेखि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासम्मले चर्कै कुरा गर्दै आएका छन् । स्वयम् थापा मन्त्री हुँदा उनले के गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर शायद उनीसंग छैन । यसको अर्थ उनले विचार राख्न अवश्यै पाउँछन् । कुरा यति हो कि आफू मन्त्री हुँदा सिन्को नभाँच्ने अनि विपक्षीमा हुँदा धेरै चर्का कुरा गर्दा समाजलाई पत्याउन कठिन हुँदो रहेछ । गगन थापालाई मेडिकल शिक्षा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा पनि मुनाफारहित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अहिलेमात्र कसरी थाहा भयो ? यात उनले भन्नु पर्यो मलाई त्यतिवेला थाहा थिएन । २०४७ साल पछि सवै क्षेत्र नीजिकरण भयो । त्यसो गर्दा कुनै वर्गीकरण गरिएन । खासगरि नेपाली कांग्रेसकै सरकारले नीजि क्षेत्रलाई यति धेरै प्रोत्साहन गर्यो । त्यसैले अहिले सच्चाउन खोजेको हो भने त्यो पनि स्पष्ट भएर आउँदा उचित हुन सक्छ । हैन भने कथं उनीहरुले भनेजस्तै गर्दा भोलि मेडिकल सञ्चालकहरु अनसनमा वस्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? कतै मुलुकलाई अस्तब्यस्त वनाउनकै लागि यो सव रियर्रसल गरिएको त हैन ?
आन्दोलनको गलत मोड
– निश्चयनै शिक्षा विधेयकको बल्झिँदो प्रकरणमा संसद्ले निर्णय गर्छ कि सडकले वा सार्वभौम संसद्को अधिकार एक व्यक्तिको अनशनले तल माथि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । यसका वावजूद अहिले भएको आन्दोलन शान्तिपूर्णनै हो । त्यसैले निषेधित वा अनिषेधित क्षेत्रमा सभा वा जुलुस निकालेर खासै असर केही हुँदैन भने त्यसलाई रोक्नु भन्दा खुला छोड्नु अन्यथा हुँदैन । निषेधित क्षेत्रको नाममा अधिनायकवादको विल्ला भिर्नुभन्दा त्यसलाई खुला छोडेर जनमतको सम्मान गरेको सन्देश दिनु सकारात्मक हुन्छ ।
– चिकित्सा शिक्षण अस्पताल सातै प्रदेशमा लैजाने कुरा विगतमा सरकारले गरेकै छ । संघीयताको मर्म अनुसार पनि काठमाडौंमात्र केन्द्रित नगरि वाहिर लैजानु उचित हुने भएकोले आशय पत्र लिएकाहरु स्वयंलेनै वैकल्पिक स्थानको खोजी गरि यो पटकलाई समस्याको समाधान गर्ने तर्फ सोंच्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सहकारीको माध्यमवाट सञ्चालन गरिने भएकोले सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा वनाउन र हालका नीजि मेडिकल कलेजलाई सहकारीकै मोडलमा लैजाने वातावरण वनाउन पनि नमूनाको रुपमा सुलभ र सहज ढंगले सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
– सरकारविरुद्घ चौतर्फी आक्रमण शुरु भएको संकेत देखिएको छ । यो विरोध सतहमा आएजस्तो सोझो रेखामा मात्र नहुन सक्छ । यद्यपि आन्दोलनमा वामपन्थी दल तथा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरु पनि संलग्न छन् । शुरुमा केसीलाई समर्थन गर्ने समूह सानो थियो तर, विस्तारै सर्वसाधारण नागरिकहरू, नागरिक समाज तथा बौद्धिकहरूको ठूलो संख्या उनको समर्थनमा सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा उत्रिरहेका छन् । खासमा कांग्रेस सडकमा आएपनि स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका कतिपय कार्यकर्ताहरुको पनि त्यस्तै लय र स्वर देखिदैछ ।
– र अन्त्यमा सवै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा जति सुन्दर सुनिदैछ, त्यो त्यतिनै खतरनाक पनि हुनसक्छ । कम्युनिष्ट फोविया भएकाहरुले यो नारा अन्रतहृदयवाट उठाएका अवश्यै हैनन् । कथं यसो गरिहाल्दा भोलि कम्युनिष्टले नीजि सम्पत्ति कब्जा गरे भने डाँको छाड्नेछन् । फेरि यीनै ब्यक्तिहरु सडकमा आउनेछन् र लल्कार्ने छन् । त्यसैले सकिन्छ भने कांग्रेसलाई यस कुरामा लिखित सहमति गराउन सक्नुपर्छ र नयाँ मोडलमा जानुपर्छ । ताकि भोलि उसले वखेडा गर्न नपाओस् ।
​विगतका कयौँ सम्झौता देशलाई गलपासो बन्यो- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, सचिवालय सदस्य (नेकपा)
​मधेसका माग यही सरकारले पूरा गर्छ- लक्ष्मणलाल कर्ण, वरिष्ठ नेता, रजपा नेपाल, सभापति, संसदीय सुनुवाई समिति
जनसंगठनहरुको अघोषित मृत्यु
​चर्को व्यापारघाटाको गम्भीरता
विजुली बसको अभियान